I-SPL Equipment kawoyela, iGesi neMining Industry
Isisetshenziswa seMandla esibaluleke kunazo zonke esitholakalayo namuhla yi-Oyili negesi yemvelo. Sekuyinto ebalulekile empilweni yomuntu nasekondliweni namuhla empilweni yanamuhla. Futhi ngokuba yimithombo eyinhloko yamandla emhlabeni wonke, zinikela ngezinto zokusetshenziswa zezinkulungwane zemikhiqizo yansuku zonke - kusuka kumadivayisi kagesi nezingubo kuya emithini nasekuhlanzeni izindlu.
Amanzi Namandla yiyona ehamba phambili embonini kawoyela negesi, ngaphandle kwayo akunakwenzeka ukukhipha, ukukhiqiza nokusabalalisa uwoyela negesi ukuqeda amakhasimende. Ngakho-ke, kungaphansi kwemithethonqubo eqhubeka nokuqina ehlose ukuthuthukisa indawo yayo yezemvelo ngesikhathi sokukhishwa, ukukhiqizwa nokusatshalaliswa. Futhi amazwe amaningi emhlabeni wonke wethule umthetho wokunciphisa ukungcola kanye nokungcoliswa okuhanjiswa ngumoya, kuyilapho izindawo zokuhluza zakha amandla okuhlangabezana nezidingo zephethiloli enesulfure ephansi.
Ukusuka kokukhishwa - ogwini nasogwini lolwandle - ekuhlanzeni, ukucubungula, ukuhambisa kanye nokugcina, Imikhiqizo ye-SPL inezisombululo ezifanele zokudlulisa ukushisa kulo lonke uchungechunge lwe-hydrocarbon. Imikhiqizo yethu nolwazi lokuchwepheshe lusiza amakhasimende asembonini kawoyela negesi ukonga amandla, ukwandisa ukusebenza kahle futhi anciphise nomthelela wawo kwezemvelo.